Global Aawaj | के पूर्ण खोप लगाएका मानिसको कोभिडबाट मृत्यु हुन्छ? के पूर्ण खोप लगाएका मानिसको कोभिडबाट मृत्यु हुन्छ?
के पूर्ण खोप लगाएका मानिसको कोभिडबाट मृत्यु हुन्छ?
काठमाडौँ । अमेरिकाका पूर्व विदेशमन्त्री कलिन पावेलको गत कात्तिक १ गते कोभिड-१९ सम्बन्धित स्वास्थ्य जटिलताको कारण मृत्यु भएपछि कोभिड विरुद्धको खोपको प्रभावकारितामाथि चलिरहेको बहस फेरि चुलिएको छ।पावेलले कोभिडको पूर्ण मात्रा खोप लगाएका थिए। नेपाली सामाजिक सञ्जालमा पनि दुई डोज अथवा पूर्ण खोप लगाएपछि मृत्यु भएको विवरण आइरहेको छ।
मानवी पौडेलले ट्विट गरेकी छन्, ‘एकदमै महत्वपूर्ण जानकारी: यो हप्ता मात्रै पूर्ण खोप अर्थात दुवै डोज खोप लगाएका ४ जना एकदमै नजिकका आफन्तहरु गुमाउन पुगेँ। कृपया कोभिडलाई सामान्य रुपमा नलिनोस्।’
रगत जम्ने र प्लेट्लेट्स कम हुने अवस्थालाई भ्याक्सिन इन्ड्युस्ड थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया (भीआइटिटी) भन्ने गरिन्छ। यस अवस्थामा धेरैजसो बिरामीको टाउको, पेट वा खुट्टाको नशामा रगत जम्ने हुन्छ। ‘त्यसको सँगसँगै प्लेटलेट्स बिस्तारै कम हुँदै जाने गर्छ। कोही मान्छेलाई खोप लगाएको ४/५ दिनमा बान्ता आउने, टाउको दुख्ने, छारे रोग जस्तो हुने, खुट्टाहरू सुनिने पेट दुख्ने अथवा दिशा गर्दा रगत बग्ने यसको लक्षण हो,’ डा पौड्यालले बताए ।
नेपालमा आफूले त्यस्तै एक बिरामीमा खुट्टा सुनिएको देखेको डा पौड्यालले बताए।‘टाउकोको नशामा रगत जम्यो खतरा हुन्छ। बेलैमा पत्ता लागेन भने उपचार गर्न जटिल हुन्छ। उपचार नभएमा ज्यान पनि जान सक्छ,’ उनले भने।
२०७८ बैशाख २८ गते प्रकाशित विभिन्न देशका तथ्याङ्कहरू समीक्षा गर्दै प्रस्तुत गरिएको एउटा वैज्ञानिक निष्कर्षमा खोप लगाएको ४ देखि २८ दिनसम्म यस्तो लक्षण देखिएको उल्लेख छ। बढीमा प्रत्येक २६ हजार ५०० मा एकजनामा र कम्तिमा प्रत्येक १ लाख २७ हजार ३०० मध्ये एकजनामा त्यस्तो असर देखिएको उक्त वैज्ञानिक समीक्षामा जनाइएको ।
नेपालमा त्यस्ता लक्षण कम देखिएको हुनसक्ने डा. पौड्याल ठान्छन्।‘यसको लक्षण देखिएपछि लुकाउन मिल्दैन, अस्पताल आउनै पर्छ। हामीले खोप लगाएपछि ज्वरो आएको र शरीर दुखेको सुनिरहेका छौँ। त्यसैले त्यस्तो घटना भएको भए थाहा हुन्थ्यो।’
तर यी खोप प्रयोग गर्न अनुमति दिने नियामक निकाय तथा उत्पादकहरूले त्यसले पुर्‍याउने फाइदाको तुलनामा जोखिम नगण्य रहेको बताउँछन्।डा पौड्याल समेत त्यसमा सहमत छन्।
खोप लगाएको ४२ दिनभित्र जीबीएसको लक्षण देखिने विज्ञहरुले बताएका छन्। जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाएको व्यक्तिमा जीबीएस देखिएपनि त्यस्ता घटना निकै न्यून रहेको बताइन्छ छ।
अमेरिकाको औषधिसम्बन्धी नियमनकारी निकाय एफडिएले गत अषाढ २९ गते प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार १ करोड २५ लाख खोप लगाउँदा १०० जनामा जीबीएस देखिएको थियो। तीमध्ये ९५ जनाको अवस्था गम्भीर भएर अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको थियो भने तीमध्ये एकजनाको मृत्यु भएको थियो।
एफडीएले उक्त विवरणमा अमेरिकामा बर्षेनि ३ हजारदेखि ६ हजार मानिसमा जीबीएस पाइने जनाएको छ। इन्फ्लूएन्जाबाट बच्न लगाइने खोपहरूको कारण पनि जीबीएस भेटिएको बताइएको छ।
त्यसमा भनिएको छ, ‘धेरै मानिसहरू यस समस्याबाट पूर्ण रूपमा निको हुन्छन्।’
नेपाली जनस्वास्थ्य विज्ञहरू समेत खोपले हाम्रो शरीरमा कसरी काम गर्छ भन्ने जानकारीको अभावका कारण भ्रम सिर्जना भएको बताउँछन्। जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक डा. समीरमणि दीक्षित भन्छन्, ‘खोपले हाम्रो प्रतिरोधी प्रणालीलाई झुक्याउने काम गर्छ। झुक्याएर साँच्चै रोग लाग्यो भन्ने अवस्था उत्पन्न गर्छ। भ्याक्सिनमा प्रयोग भएको रसायनहरू मानव शरीरलाई असर गर्ने खालको हुँदैन।’
अहिलेसम्म देखिएको गिलान-बारे सिन्ड्रोम र भीआइटिटीजस्ता असर नगण्य मात्रामा भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। ‘१ लाखमा १-२ जनामा देखिनु नगण्य हो। त्यो कोभिड रोगले पनि हुनसक्छ र कोभिड खोपले पनि हुनसक्छ। साइड इफेक्ट्स छ तर धेरै न्यून छ,’ डा दीक्षित भन्छन्।
काठमाण्डौको टेकु अस्पतालका प्रमुख डा.अनुप बास्तोलाका अनुसार तीन चरणको परीक्षण पछि सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेर मात्र खोप सर्वसाधारणलाई लगाइन्छ। कुनै कारणले खोप लगाएको मानिसको मृत्यु भयो भने त्यसलाई खोपकै कारणले मृत्यु भएको भन्न नमिल्ने उनको मत छ। ‘मृत्यु हुने अन्य कारण पनि हुनसक्छ। खोपलाई दोष दिइहाल्दा त्यसले मानिसहरूमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ,’ डा बास्तोलाले भने।
‘हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने कहिलेकाहीँ खोपको प्रयोगको शैली समुचित तरिकाबाट भएको छैन भने पनि खोपले काम नगरेको हुनसक्छ। अथवा खोप लगाएर पनि मानिसको शरिर रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बनाउन नसकेको हुन सक्छ।’ अस्पतालमा भर्ना हुने मध्ये खोप नलगाएकाको संख्या धेरै भएको उनको अनुभव छ।